Ityala laseHonduras, makhe lithethe imbali-iGeofumadas
Kwimeko yeHonduras, vumela ibali lithethe
Ityala laseHonduras yimeko ezele kukudideka okuninzi endingajolisanga kuko ngenxa yokuba kukho abantu abanendima abayidlalayo. Eyona nto inzima kukuba umlo ayisiyolawulo lwedemokhrasi kuphela kodwa ikwanazo neembono, kwaye ukuza kuthi ga ngoku ndikhetha ukungabambeleli empumlweni.
Andiyi kuxolelana nelilungelo, kuba isiqingatha sobomi bam sindibonise ukuba wonke umntu (kunye nezinye izinto) alinganayo, unomdla kwimicimbi yabo, ahlala emdlalweni.
Andiyi Ndiyavelana nge ekhohlo kuba nangona abaliqela postulates zayo umdla, baye enkosi ngegalelo lakhe yokoyisa ezininzi zentlalo, yintoni eyenzekayo kukuba ipesenti ephezulu usapho lwam wafa babesilwela le mithetho-siseko nasemva kokuba phantse isiqingatha sobomi bam Ukuphupha kwezithembiso zakhe, ndachitha esinye isiqingatha ukuzama ukuzibala.
Kwaye imimidi phakathi kwababini, inokuba yinto ephosakeleyo njengento ephangaleleyo, ngokufana nokudlala nebhodi yamagqabi wesithunzi somfanekiso we-satellite ... kodwa kwilwanyana.
Ngoko wayelithetha amatakane amabini esikolweni, indlu yam yokuhla kwexabiso phezu abile, nokwaliwa ukuzibaxa kweyabo Umqala iindlela zobomi ukuba andisayi kuyenza kodwa ngaba ekunene, ekugqibeleni wenza ukuba ngaphandle kwam I-adrenaline yenyanga iphela ngamaphupha kuba ihlabathi lingaba yindawo engcono ... kuwo wonke umntu.
Ixesha liyazi kodwa ndifuna ukuvala isahluko sayizolo ukuba ndingakwazi ukuyidibanisa ngeselula kuba uqhagamshelo lwe-intanethi lwaluyintlekele. Bendikulangazelela kakhulu ukugqiba iposti malunga noncedo lokugcina iimephu ze-cadastre ezimdaka ngexabiso labo lembali kunye nelomthetho kodwa ukuphefumlelwa kuyanqunyulwa xa kufuneka ucinge ngokhuseleko lwabantwana bakho abangenalo nofifi ngomngcipheko okhoyo phaya ngelixa benentambo TV.
1. Ndiyagxininisa kumba womba worhwaphilizo
Aba bantu bakhathele kukusetyenziswa gwenxa kwamandla, ukusetyenziswa kwezixhobo zikarhulumente (kuthi) ngeenjongo zabucala okanye zichithwe ngokungakhathali. Umququ wokugqibela ubonakala kwabo bakwenza oko ngokungakhathali kangangokuba bade bagqabaze njengobuqhophololo obunconywayo, kwaye wonke umntu uyazi. Ndikwanobuganga bokucinga ukuba nabo ngokwabo bayayazi loo nto.
Ngethuba nje le nto iqhubeka, kuya kubakho ukungazinzi kwintando yesininzi eLatin America.
2. Ukubetha okanye ukungabethi, yintoni umahluko owenzayo
Iindaba zamazwe ngamazwe zijolise kwizinto zokulwa nomkhosi, abanye abaye bathetha namaHondur baya kuthiwa yi-oligarchic iqhinga, abanye bathi yi-succession constitutional.
Yeyiphi le nto, andinathemba lokuyenza ibe semthethweni, kuya kufuneka ulapha kule minyaka imbalwa idlulileyo ukuze wazi ukuba yintoni. Okwangoku, urhulumente omtsha kufuneka azithethelele ngokusesikweni ngokwasemthethweni kwilizwe liphela, kwaye lowo wangaphambili kufuneka afumane amandla awaneleyo kwi-ALBA, i-OEA, iMercosur kunye neminye imibutho yokulwa ilungelo layo.
Andikhathali, uxolo lwabemi lwaqhekeka, kokubini ngenxa yomongameli owayedla ngokuthi "le ndoda yimeyile yam", kwaye ngeenjongo ezintle walwa neqela lakhe, neecawe, amandla ezomthetho, indlu yowiso-mthetho, i-ofisi yomtshutshisi woluntu, kwaye ekugqibeleni nemikhosi. Uninzi lwezenzo zakhe lusishiya sithandabuze kakhulu malunga nokuba ngubani omele ukubeka ucwangco kwizenzo zomongameli. Kwangokunjalo, elinye icala laphula uxolo lwethu, ngokuluvumela ukuba luye kude kakhulu nobuyatha balo kunye nohanahaniso lwabo bakhetha ukuvumela umntu ukuba agqibe ukutshona ukuze azise amanzi okusila.
Kodwa ekugqibeleni ilifa likaZelaya lihleli kubemi, abavuke benethemba lokumanyelwa, kwaye ngoku uzakubanga. Ngelishwa, ikwenzile oko ngendlela eyayinempikiswano enkulu phambi kokusekwa komthetho welizwe kwaye iphantsi kothando ngakwicala lasekhohlo elingenalo uvelwano lokurhoxiswa kwenkululeko ezininzi kumazwe apho ifakwe ngendlela yobuzwilakhe.
3. Umnqophiso obunzima, ungabuyi kwakhona
Ngoku kuza uvavanyo lwe-litmus, owangena ezihlangwini zomgaqo-siseko uneenyanga nje ezintandathu zokubonisa ukuba akazukunkcenkceshela njengabantu abaninzi njengoko besinako. Ngo-Novemba kufuneka kubekhona unyulo luka-Mongameli kwakhona, njengoko bekucwangcisiwe kwaye eli bali libhudayo maliphele okoko kusekho ithuba lokukhetha "okona kubi"
Kodwa njengokuba ezi nyanga zintandathu zidlula, sonke sinethemba lokuba isahluko sobuhlelo obugqithisileyo siza kuvalwa, kwaye ingxoxo yesizwe iya kuvula apho kunikwa khona amathuba okuthetha malunga notshintsho oluninzi oluyimfuneko ixesha elide. Ilizwe linemikhwa emininzi ekufuneka ijongane nayo, njengokuxhasa ezopolitiko, ukungabikho kocwangciso lwexesha elide, ulungelelwaniso ngokutsha kwezomthetho, ukwabiwa kwemigca kwiindawo ezithile, ilifa lamagunya ezopolitiko kwinqanaba lefani, bipartisanship engenampilo, ngokufutshane ...
Ukuba ufuna ukwenza utshintsho oluthile, umsebenzi ohlala ixesha elide uthathwa, kwaye oku kuthetha ukuvula umnyango ekuthatheni inxaxheba koluntu ngokunye okunye okubhekiselele kwindlela yokucinywa komlilo, ngokubhekiselele kwi-referendum ekhoyo ngokusemthethweni kunye nomgaqo-mthetho.
Ukuba sicela umntu oza kungena ezihlangwini zakhe ngento enye, kukuba kwiinyanga nje ezintandathu, MUSA UKUMKHANGATHA, kuba lifutshane kakhulu ixesha leenkani eziboniswe zezinye zeembono zakhe zehlelo. Ilizwe linethuba elinomdla lokuthetha ngokunyanisekileyo, la maxesha, kunye neNkanyamba uMitch, angadlala ngezinto ezincinci.
Phambi kokuba ubonisa ihlabathi nokumbona njengomongameli siseko, kufuneka zibonise ukuba xgará efana nabanye abaninzi ngexesha elingephi ukuba abakwazi ukubhala isithuba 180, bona 6 bhanyabhanya kwi zabe ndiye ecaweni amaxesha 24 ngethemba lokuba abantwana bam baye into ukukholelwa.
4. Ukuba kukho intshukumo entsha
Ndiyaqiniseka ukuba amaqela ezopolitiko ayimfuneko ekusebenziseni intando yesininzi, kodwa enye indlela engcono kufuneka ivele phambi kwezinto eziwonakalisayo ezenzeka kulo lonke elaseLatin America kwaye ezikhokelela ekulawuleni iziko kwiminyaka emine njengoko:
Ukuthengwa kwamajelo eendaba, mhlawumbi nguRhulumente ukugubungela iimpazamo okanye iimpembelelo zabanye ukugcina iimfuno zabo.
Inkqubela ephambili kwimithetho efana nokusebenza kwamagosa karhulumente kunye namagosa kamasipala, okungavulela umnyango kwindlela yokulwa nokuxhaswa kwezopolitiko amazwe amaninzi asele akhuthazile.
Inkcazo yesicwangciso sexesha elide, esizalwe yintsebenziswano yentlalo kunye nezopolitiko, njengokuba urhulumente ngamnye ozayo, uyazi ukuba yiyiphi inxaxheba kwizibonakaliso ezibucayi kufuneka zifikelele kuyo.
Ukunikezwa kwamandla olawulo lophuhliso loqoqosho loorhulumente ophezulu kumasipala kunye nokuhlaziywa kwamanyathelo enqila anika uxabiso kwisebe likaRhulumente, ngaphezu kwekhonkco yezopolitiko.
Ukuhlaziywa kwemigaqo-nkqubo yoluntu eqwalasela ityala lezenhlalakaphu elikhoyo, kwaye yileyo nto ebangela le ngxabano.
Ukuba oku kunye nezinye iinguqu ze-235 zingenziwa ngamaqela akhona, bamkele, banako konke ukusetyenziswa kwezixhobo zabantu kunye neengqondo; Akunjalo ixesha.
Ukuba ke abenzi njalo, ngoko kuya kubakho intshukumo omtsha oluya indlela yakho elalini, nokuba oko kuthetha ukuthatha igama ezifana emini njengoko ndeva apho ngenye imini: "Movimiento Social bathi Lempira nde", hehe, yiya igama .
Ngamafutshane, phelisa konke oku, kukho inzuzo kunye nokuqiniswa kwezizathu zentlalo yoluntu, njengoko watshoyo apha
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukuqhuma kwenzeka
Post Next Iintsuku ze-6 eziguqule ubomi bethuOkulandelayo »
Uphendula "Kwimeko yeHonduras, vumela imbali ithethe"
RAQUEL MARIA uthi:
EGAMENI LENKOSI YETHU UYESU KRESTU NDIXALELA ABANTU BASE HONDURAN UKUBA BANGANGABONI YONKE INTO NGOBA SIYAZI UKUBA ABO BATHANDA UTHIXO YONKE INTO ISINCEDA INDODA ELUNGILEYO YITHI YINYE INTO KODWA INGQIQO KATHIXO Iphakame Kunezulu. UTHIXO WOMHLABA ULAWULA ZONKE IZINTO EZITHEMBEKILE KUYE AND UYA KUHARA Uloyiso lukhuselekile UKUBA SITHEMBEKA KUYE, SIHLALE SILANDELA UKUKHANGELA KUYO AKUKHO NTO IFIHLIWEYO YONKE INTO AYAZIYO NAKHO KONKE, UTHIXO AKUSIKELE ...
Antonio Mejia uthi:
into ebonakalayo MUSA udinga izibuko ITYALA HONDUREÑOES A State GOLPEDE xa cahoots kunye oligarchy Honduran wazenza zedemokhrasi, urhulumente kwimeko cavemen UNYAKA esiveza GORILATTE kaThixo LASDICTADURA anegazi S OF AMERICA throbbed ngathi SOMOZA eNicaragua, zwilakhe LEYO Powerto igazi etroneni nomlilo zaxhaswa mbho- njengokuba udaka BY THE unodoli JEFEADA Romeo Vasquez.
Domingo Hernandez uthi:
Mabantloko, kunokwenzeka njani ukuba umbono wamazwe ngamazwe, i-OAS kunye nabanye
oorhulumente baseLatin America, banelungelo lokuba uMnu Zelaya,
ngokwalezi zinto, bamnike i-coup de d'at, ekubeni nguMongameli
ukhethwa ngamaphulo; njani akumangalisi ukuba uMnu Chá-
Ngesinye isikhathi, uEvo Moralez, uDaniel Ortega noCorrea, bahlala belibale
ukuba abaninzi abachasi bakhe banyulwa kwakhona, kwaye
Bahlala behlukumeza, bamtshutshisa baze bahlale bemthobela
zibetha umgaqo-siseko kunye neziyalezo ezimiselwe kwi
Ndiyicinga ukuba into enhle yeTurkey nayo iya kuba yinto enhle
i-turkey, okanye yileyo xa kufike kwizinto ezithinta i-turkey esivaliwe
amehlo; umgaqo-nkqubo kufuneka ube ngumdlalo wehlabathi lonke.
yintoni umsebenzi ombi
Ngokucacileyo, imeko ye-Honduras iya kuba sisifundo secala, kuba uxolo kunye nentando yesininzi yanyanzeliswa kwimisebenzi egqithisileyo, inkohliso kunye nokuchasana kwexesha elizayo kwalowo wayesakuba nguMongameli uZelaya, exhaswa nguHugo Cháves. Lithuba elihle ukuba i-Honduras ibe nayo, engakwazi ukuhlawulela inkunkuma ukuqala apho amandla omthetho, umlo ochasene urhwaphilizo kunye nokuqulunqwa kwesiCwangciso seLizwe soosopolitika. Musa ukuchitha izibonelelo, ixesha kunye nomzamo kwaye wenze iHonduras ilizwe elingalingani kangako.
Ngenhlanhla into abakwenzayo ngentando yeninzi eHonduras kunye nabantu baseHonduran apha eVenezuela sicacile ukuba le nto iyabetha kodwa enye inkunzi ye-demokrasi inxaxheba inxaxheba, ummeli kunye nomgcini-nxaxheba sichasene ngokupheleleyo ne-autocracy kwaye wentando!
Kwenzeka njani ukuba sizama ukusindisa ubuKristu wazama ukubulala abo bangafuniyo ukukholelwa kulo; kwaye ndithetha oku kuba kwimeko yeHonduras, oko kwenzeka; UMnu Zelaya iinkosi zoluntu lwamazwe ngamazwe, amalungu OAS yayinoxanduva oko kwenzeke, wayeza iyangqubana yokuyilwa yamagunya uyayenza, nxamnye usompempe igunya kurhulumente wakhe, uMnu Zelaya, njengoko Chavez , ICorrea, i-Ortega ne-Morales bafuna ukuphumeza ukutshatyalaliswa komgaqo-siseko; kodwa njani ukuqonda ezi zinto uMnu Jose Miguel Insulza, ekubonakalayo ukuba abe ingqiqo elimxinwa kakhulu yedemokhrasi; Le nto ayinakuchazwa kumntu onomsebenzi owaziwayo wezopolitiko; kukuba ukuzimisela uMnu Insulza kukuphumelela kwivoti ulonyulo kwakhona kwi looNobhala we-OAS, wamenza uvale amehlo akhe, engayi kukubona ukuba idemokhrasi ayikho nje ukuba ukhethe kwi uvote, kodwa lowo ungenako kungqubana imigaqo yenkolo yedemokhrasi engabikho kwintliziyo yakho; Yezizathu uMnu Insulza ucinga Chavez, uMorales, Ortega kunye uMorales ke wedemokhrasi, owaphula umgaqo-siseko kunye namalungelo oluntu kumazwe abo, xa luphawula ukuba Fidel Castro asiyo uZwilakhe yaye uhlale iminyaka engamashumi amahlanu ukulawula ilizwe kungekho khetho ngaphandle kwakhe; yinto ephezulu yedemokhrasi; O lukhululekileyo luninzi lwaphulo-mthetho olwenziwe egameni lakho
I-Otrava Gums uthi:
Sivuyisana Honduran, lubonise ukuba umgaqo-siseko uyahlonitshwa, ngethemba ngolunye usuku Venezuelans sibe nesibindi kunye udtedes ixabiso lubonise, nokuba iblukhwe kanye elizukileyo umkhosi Venezuela sijamelana Venezuela liyadla corrupcionque.
UChavez uya kuqhubeka nokuchitha iidola zeedola ezingenayo oorhulumente baseLatin America kunye neprojekthi yakhe yobuntu, ngokuzama ukuzama ukulingisa uzuko lukaSimon Bolivar.
Barvo Hondurans, asinakuziva ngakumbi kunomona ngenxa yesibindi.
KUCACILE KWI-HONDURAS KWAKUKHO I-COUP D'ATTE KWAKUNYE NAKUKHO KWI-VENEZUELA, AKUKHO MNTU UYAQWALASELA UKUTHI SIPHILA NGOKWENENE YIYO LEYO ABAongameli BENGUQINISEKO NGOKUQINISEKILEYO SIFUNA UKUBA SONKE SIFUNA UKUTHI SONKE SIYALA NANTSI INTO BAFUNA UKUYIBUZA KUNINZI KUNYE XA SIYA EZULWINI NGOKUBA BABUZIWE INDLELA UTHIXO AZOKWAMKELA NGAYO OBUJONGEYO NDIZOJONGA KUYO UKUBA NDINQWENELE UBUBI BOMMELWANE. KWAKUKHO ICOUP D'ETTE OKEY …………………………………….
Uyazi, ngokwenene asiyazi bonke iOOOOODO ubungakanani bezinto ezenzeke kwilizwe lethu, oko senze YONKE I-HONDURANS.
Oko uNksz Margarita Montes uthi yinyaniso, imibutho yamazwe ngamazwe AKAZI OKUBENZA KUNYE NAKO.
Abalawuli bamazwe e-ALBA bayoyika ukuba abantu babo baya kuthatha "UMZEKELO OMBI" waseHonduras kwaye loo nto ibangcangcazelisa, kodwa hey….
Into endifuna ukuba ndikuxelele kukuba siyazi ukuba uThixo usele wathatha ulawulo lwesizwe sethu.
Siyazi ukuba uThixo uya kuphakamisa ifulegi phezu kwethu, siyazi ukuba uThixo usebenzisa ububi behlabathi ukuba abuyisele izilumko kunye nabuthathaka behlabathi ukuba babe neentloni ezinamandla.
Uyazi? ihlabathi libuyela kulo, kodwa likhulu kunathi kunokuba likhona kwihlabathi.
UMHLABA WONKE UYA KUFUMA, KUBA SIPHUMELE UKUBA SIYA KUTHETHA OKO KUTHIXWA KUNKULUNKULU.
Abo banamhlanje bayasibuyisela umva, thina sithembekile kubo, ngomso baya kuzibuza oko kwenzekayo? Sinokufumana njani into enayo? Benzani ukuba babe yiloo nto namhlanje?
Kwaye siya kukwazi ukwabelana nabo kwaye sitsho kubo UNKULUNKULU NAKU US, SIYAXA.
UMALUNGU GALUP uthi:
Into ebalulekileyo ngeziganeko zaseHonduras kukuba ilizwe lavula amehlo kwaye oko kubenze baba luhlanga OLUKHULU! UMONGAMELI AKANAKWENZA UKUPHAKamisa X KUMGAQO-SISEKO WERIPHABHLIKI, XQ KUYAKUBA NGOKUBA UKUBA UNYANA WAYEKAHLONIPHILE UMAMA WAKHE ... XQ UMAMA UYATHANDWA UHLONISHWE PHEZU KWAZO ZONKE IZINTO NOMGAQO-SISEKO NGOKUBA NGUMAMA BONKE ABEMI. NDIYAKUTHANDA HONDURAN ... UXOLO LUYA KUBUYA! THULA, YIBA NOKHOLO KWINKOSI YETHU UYESU KRESTU NAKUMAMA WAKHE OYINGCWELE OWANIKEZA INDODANA YAKHE UKUZE USINDISE IHLABATHI ...
Funda le nqaku kwiphephandaba lase-El Pais
Ndikwabelana ngale ngxelo kunye nawe
I-HONDURAS BREAK I-PARADIGM KWI-LATIN AMERICA
UMargarita M. Montes
Ukususwa kukaMongameli José Manuel Zelaya Rosales ngamaQumrhu oMkhosi kwiiyure zokuqala zeCawa ye-28 yangezolo, uphula iipaladigms zembali yezopolitiko yaseLatin America. Ngokuba lixesha lokuqala xesha IMfazwe iposi (ukususela 1989 ukuya kumhla), umkhosi asuse umongameli siseko anyulwe ngokwentando yesininzi, ukubuyisela ulawulo lomthetho, kungekhona ukwaphula umthetho elizweni, njengoko kwaba uphawu lomkhosi kwiiyure zangaphambili.
Eli tyala alinakuchongwa njenge "coup d'etat", kuba ayihambelani neempawu ezimbini ezisisiseko zalento yezopolitiko: ukuxhonywa komkhosi kunye nokophula umthetho. Inyathelo elathatyathwa nguMkhosi oxhobileyo waseHonduras lalusekwe kumyalelo wenkundla kwaye injongo yawo yayikukuphinda kumiswe umthetho, owawusaphulwa njalo ngu-Mongameli weGunya loLawulo ngokwakhe, ngokutyeshela izibonelelo Amandla ezeezoMthetho kunye noMthetho (iisheti kunye nokulinganisa). Emva kongenelelo lukaMkhosi oxhobileyo, uMgaqo-siseko wezopolitiko usaqhubeka ukusukela ngokulandelelana kwamandla okusekwe yiMagna Carta kwahlonitshwa ngokupheleleyo, apho kwaqeshwa uMongameli woMgaqo-siseko omtsha.
Yaye ukuba ukususela kwinqanaba umbono lenzululwazi kwezopolitiko, Honduras izolo wahlala umzekelo, nto leyo ngokuqinisekileyo uya kuba ityala isifundo iiyunivesithi, oonozakuzaku nabezopolitiko ehlabathini lonke .. Kuba okokuqala Latin America, abantu ubukele , ngaphandle kokuchitha igazi kunye nokungabikho kobundlobongela, ngokumelene noMongameli okhethwe ngumgaqo-siseko kunye nentando yenkululeko, ngenxa yokuphulwa kwemimiselo yomthetho kunye nesakhelo sesikhungo samanje kweli lizwe.
Yiyo loo nto iindaba zosasazo zamanye amazwe, imibutho yamanye amazwe kunye noorhulumente kwihlabathi liphela, bengawuqondi umxholo kunye nobunyani beli tyala, kwaye bayakugxeka okwenzekileyo eHonduras, kuba bayihlalutya ngokusekelwe kwimibono ye Iparadigm yakudala yamakhonkco ngexesha leMfazwe ebandayo. Uluntu lwamanye amazwe, oluntu nolwangasese, alkabinalo ixesha, okanye izinto, zokuqonda ukuba eHonduras imodeli yaphulwe izolo kwaye yityala le-sui generis ngokupheleleyo.
Isifundo esinikezwe iHonduras ngelokugqibela kucacile: nangona uMongameli ukhethwe ukhetho ngentando yenkululeko kwaye akavumelekanga, akanalo ilungelo lokungathobeli umgaqo-siseko kunye nemithetho yeRiphabhliki. Abantu abangeke bazimisele ukunyamezela lolu hlobo lokusetyenziswa kakubi kwamandla kaMongameli kaMgaqo-siseko, abahlala becingelwa ukuba bangenakuthenjwa, ngenxa yokuba bonyulwe ngabantu. Umyalezo osuka eHonduras ulula: ivoti ethandwayo ayifaki ilayisenisi yokwenza ulwaphulo-mthetho, kwaye nayiphi na inzame ukulawula ukulungelelanisa okufanelekileyo kufuneka ibe kwisakhelo somthetho.
Mhlambe Hondurans abaye baqaphela ukubaluleka koko benza izolo. Ukutyhubela imihla, iinyanga neminyaka ihamba befunda kunye nokuqonda isici nenguqulelo ezintsha wahlala umyalezo ecacile nabahlobo kunye ongabaziyo egcina ukuba oozwilakhe siseko kunye abakuqeqesho zabo emvula. Lowo uneendlebe zokuva, makeve.
UThixo kuphela olawula imeko lonke kwilizwe Honduras, kwaye uqinisekise ukuba uyayazi singabenyaniso, yaye kuya kufuneka kude kangakanani ukuba izinto, wagcinwa, ukuba okusesikweni, UThixo uyabachasa abanekratshi, kwaye unike izipho kwimimandla,
Andiyicingi ukuba ihloniphekile ukubeka izimvo kwizinto omele ukwenze ezweni lakho. Akuyinjongo yam ukwenza.
Ndifuna nje ukwabelana ngezinto ezandifunde ukuba ndiphile ngolo ludumo olulodwa (ezininzi zelizwe lam elihluphekileyo, e-Argentina).
Okokunyanzelisa (1976-1982), kuthathe amandla alahlekile iinyanga ze-9 ukuze uRhulumente ka-Isabel Martínez aphelise. Kwakungurhulumente obi, kodwa oko kwenzekayo kwakunexesha lee-10.000 ezibi nakakhulu. Kwakuyimfuneko. Oorhulumente ababi, bodwa, badlula kwaye bangabuyi. Ukuba urhulumente ombi okanye umbusi, wenza ubugebengu, kuba kukho umthetho kunye nazo zonke izibonelelo zayo.
Kwi-2001 yaseArgentina yahlala enye yentlekele yezoqoqosho nakwizentlalo kwimbali yayo. Ngokukuxelela ukuba kwiintsuku ze-10 kwakukho i-7 (ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo) abaMongameli abahlukeneyo. Kwakukho ukunyanzelwa kwamapolisa kunye nabantu abafa. UMongameli akazange agqibe ixesha lakhe. Washiya. Kodwa kwakungekho ncamnye kwakucingelwa ukukhwabanisa. Akukho mntu uthathwe kwilizwe. Amanyathelo amanyathelo athatyathwa ukuze abone indlela ukugcinwa kweziko. Akukho Mongameli ophakanyiswayo kunye nombutho ongaphandle komthetho. Umongameli-unyuli unokungalunganga, enze iimpazamo, kodwa kufuneka enze ngaphakathi komthetho, kwaye ukuba uyaphuma kuwo, umyalelo ofanayo uya kuwela kuye. Namhlanje, owayengumongameli uCarlos Menem uyaqhubeka ehamba ngeenkundla kwiimeko ezahlukeneyo zenkundla. Ufana noDe La Rúa (ongazange agqibe ixesha lakhe kwi-2001). Akukho mntu uyakhathalela ukuba ngaba ngabaongameli. Ngokuchanekileyo, ngezizathu ezininzi, kufuneka zichaze konke okufunekayo kwiiNkundla.
Oko kufuneka ukuba ube nokunyamezela. Ubulungisa busoloko bufika. Musa ngokukhawuleza njengoko sifuna, kodwa ube nokholo.
Kungakhathaliseki ukuba lubi kangakanani urhulumente okhethwe ngabantu, akunakuze kube yinto embi njengobuntshatshazi.